Al-Shabaab oo gudaha u galay Tuulo ka tirsan deegaanka Lamu – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ku dhowaad boqol dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo aad u hubeysan ayaa gudaha u galay Tuulada Basuba oo deegaanka Lamu ka xigta dhanka bari, halkaasoo dadka deegaanka ay ugu wacdinayeen muddo saacad ah.
Goob joogayaal diiday in la magacaabo ayaa sheegay in dagaalyahanada ay gudaha tuulada soo galeen abaarihii 5-ta subaxnimo, iyadoo dadka tuulooyinka ka soo saaray guryahooda, waxaana ay u khudbeynayeen illaa lixdii subaxnimo xilliga waabarigii ahaa
Waxay ku amreen illaa saddex boqol oo dadkii tuuladaas ahaa inay hal goob isugu yimaadaan, halkaasoo markii dambe ay ku wacdiyeen.
“Waxaa arkay ciidamo aad u hubeysan oo ka gaarayay ilaa 100 ruux, waxay labisnaayeen dhar cagaaran oo keymaha oo kale ahaa”ayuu yiri qof diiday in la xigto.
Dagaalyahanadan ayaa dadka uga digay inay la xiriiraan ciidamada, sidoo kale waxay kaga digeen inay raacaan baabuurta ciidamada ee ay leeyihiin Booliska iyo Milateriga.
Ma ahan markii u horeysay oo dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab lagu arko agagaarka Lamu, bilo ka hor ayay aheyd markii weerar ku qaadeen saldhig Ciidamada Milateriga Kenya ku lahaayeen Lamu, halkaasoo looga dilay illaa 11 dagaalyahano ah.
Al-Shabaab ayaa muddooyinkii u dambeeyay weeraro ka geystay gudaha Kenya, gaar ahaan Gobolka xeebta iyo waqooyi bari.